Aaska Xildhibaan Koodhaa oo Maanta ka dhacay Magaalada Gaalkacyo – SBC
Aaska Xildhibaan Koodhaa oo Maanta ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Posted by Webmaster on September 21, 2011 Comments
Waxaa maanta Aas loogu sameeyay magaalada Gaalkacyo Xarunta gobolka Mudug Alaha u naxariistee Xildhibaan C/raxmaan Axmed Xaaji (Koodhaa) oo habeenimadii xalay kooxo hubeysan oo aan heybtooda la aqoon rasaas ku hubiyay goob ka ag dhow gurigiisa.
Aaskii Xildhibaanka ayaa waxaa maanta goob joog ahaa saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland oo ay horkacayeen Wasiiro ka tirsan dowlada Puntland oo iyagu ku sugan magaalada Gaalkacyo, dadweyne aad u diro badan iyo weliba eheladii uu ka baxay.
Xildhibaan Koodhaa Ale ha u raxmadee waxa uu ka mid ahaa odayaasha sida weyn looga yaqaan gobolka Mudug islamarkaana looga bartay ka shaqeynta amniga iyo nabadda.
Xildhibaanka waxa uu ku dhashay Deg Ceelcad, isagoo da’diisa aheyd 45sano, isagoona waxbarashadiisa ilaa Heerjaamacadeed ku dhameystay Magaalada Muqdisho Caasimada dalka, waxaanu iminka ahaa xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Puntland.
Dhamaan Umada Soomaaliyeed gaa rahaan uwa Reer Puntland ayaa Tacsi u diraya dhamaan mushtamaca Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka geeriyooday.
Liibaan C/laahi Faarax